15 Yakanakisa Yekupedzisira Kucheka Pro Windows Dzimwe nzira (2020) - Softwares
Kana zvasvika pakugadziriswa kwevhidhiyo, sekugadzirisa chaiko kwekugadzira mameseji evhidhiyo. Mavhidhiyo ane simba rekuchinja nzira yekufunga uye nemaziso anotora seakanaka zvechokwadi. Tekinoroji yanhasi yekucheka-cheka haingobvumidze kutora nguva yakanaka asiwo kuvaita kuti vafare uye vabate. Final Cut Pro ndeimwe yakadaro acme yekufambira mberi kwemazuva ano kwetekinoroji.
Yekupedzisira Kucheka Pro - Pfupi Ruzivo
Iyi foto yekugadzirisa software ine zvese zvinehunyanzvi mupepeti uye zvinopfuura izvo zvinokumbirwa nemushandisi wezuva nezuva. Inoshandiswa zvakanyanya uye inozivikanwa nekuda kwayo nekukurumidza uye nyore kushandisa maficha. Aya maficha anogona kubatsira kugadzira mavhidhiyo akakwana kune akanakisa ruzivo uye akakosha nguva yevanhu. Pamwe chete neVhidhiyo, iwe unogona zvakare kukwidziridza odhiyo zvinobudirira kucheka mutengo uye nekuparadza nguva. Uchishandisa iyi pa-nzvimbo kuzere -kugadzirisa-vhidhiyo vazhinji vanoyerera vasvika mamirioni evateveri.
Kudiwa kweimwe nzira:
Kunyangwe yakakwana mukutora mhedzisiro, kushandisa Final Cut Pro ine mugove wayo wezvakaipa. Chekutanga pane zvese, inhamba shoma yemidziyo inoenderana. Final Cut Pro inowanikwa chete paMac OS iyo inoruramiswa kupihwa ayo akasimba anodikanwa nekugadzirisa kwakasimba. Asi zvakadaro kune vakawanda windows vashandisi kupfuura Mac uye havazi vese vanogona kutenga Mac Midziyo.
Kusagadzikana zvakare chinhu chinotsigira kudiwa kweFinal Cut Pro imwe nzira. Iyo software inobhadharwa uye unofanirwa kubhadhara 377.88 $ uye iri kunze kwebhajeti revazhinji vanotangisa edhirowa. Kunyangwe ichionekwa seimwe-nguva yekudyara ingaite senge inoruramiswa, sezvo ichigadziriswa mahara. Asi uyu mutengo wemitero hautaure kuvashandisi vatsva uye kusimuka kwevagadziri vevhidhiyo. Mari yacho yakakwira zvekuti unogona kutenga DSLR nemari yakawanda iyi!
Unoda kushandisa iMovie paWindows? Tarisa Yakanakisa iMovie Dzimwe nzira dzeWindows 10 kubva ku blog yedu chikamu.
Final Cut Pro Windows Dzimwe nzira - Pros & Cons
Kutanga nechinonyanya kukosha icho Final Cut Pro imwe nzira inozadzisa ndeyekuti izvi zviripo kune windows. Kupa nhamba hombe yevashandisi vewindows, izvi ndizvo chaizvo zvakakodzera. Alternative software yakachipa pane Final Cut Pro iine zvishoma kana musiyano muzvinhu. Iyo software zvakare iri shoma Hardware inoda uye ine yayo pachedu maratidziro e windows. Kufanana neizvi zviri zvishoma mushandisi-zvine hushamwari pane Mac iwo.
Kana iwe uri mutsva mu vhidhiyo yekugadzirisa uye vari kutsvaga software kutanga kubva kune ako windows, kana iwe uri Nyanzvi. Iyi 15 software ine zvese zvaungangoda iwe uchisimudzira kugona kwako. Zvese zvirinani uye zvakaenzana mukuenzanisa neFinal Cut Pro. Pasina chero comPromise mune yekugadzira kuburitsa, edza idzi Final Cut Pro dzimwe nzira.
Panogona kuve pasina zvirinani Final Cut Pro imwe nzira pane ino vhidhiyo yekugadzirisa software yakaitwa naAdobe. Iyo yekugara yakanga isina kufananidzwa muminda yekugadzirisa mifananidzo kubva payakatanga kutangwa. Iyo vhidhiyo yekugadzirisa software Adobe Premiere Pro yakakwidziridzwa kubva kuAdobe Premiere yakavambwa muna 1991. Yakagadzirirwa maProfessional kushandiswa chete, nepo imwe vhezheni yeiyi software 'Adobe Premiere Elements' iri yekushandisa kweMunhu.
Iyo software inoshandiswa neCNN neBBC. Akakurumbira mafirimu senge Deadpool, Gone Musikana, uye terminator rima zvinogadzirwa uchishandisa Adobe Premiere Pro. Iwe unogona kugadzirisa epamusoro-resolution mavhidhiyo kusvika ku10,240 x 8,192 resolution mune ese RGB uye YUV. Iyo inobvumira 3D kugadzirisa, odhiyo-yekugadzirisa, uye VSR odhiyo plug-in tsigiro. Zvese zvakakosha Broadcast-nhanho yekugadzirisa uye inodikanwa yekugadzirisa-vhidhiyo inogona kuitwa mune ino software.
Yakakurumbira Final Cut Pro imwe nzira, muAdobe Premiere Pro, inogona kuendesa vhidhiyo, odhiyo, uye mifananidzo. Iwe unogona kutumira kunze mavhidhiyo pasina kukanganisa gadziriso mukuparadzira yakagadzirira fomati. Wedzera mhedzisiro muvhidhiyo, shandisa zvidimbu nemifananidzo, zvivhenganise pamwe chete, uye mazita ekugadzirisa maapplication mune software. Iyo inotsigira yakakura nhamba yemavhidhiyo mafomati uye akabatanidzwa maapplication.
Premium yemhando vhidhiyo resolution
Nhamba hombe yemafaira akatsigirwa
Hapana yemahara vhezheni, inowanikwa chete yemahara kuyedzwa
Zvimwe zvekushandisa zvinodiwa
Premiere Pro Imwe App pa ₹ 1,675.60 / mwedzi
Bhizinesi pa₹ 2,300.00 / mwedzi
2. Corel VhidhiyoStudio Pakupedzisira
Kana iwe uchiziva nezve akakurumbira mifananidzo ekugadzira maapplication saka iwe unofanirwa kuve wakaomarara nezveCorel. Kana paine mukwikwidzi anopesana neAdobe foto yekugadzirisa, kunezvimwe zviri Corel. Yakagadzirwa muna 1985 kambani iyi yakatanga CorelDraw graphic designing software iyo yakave yakakurumbira zvakanyanya zvekuti ichiri isina kufananidzwa. Mushure mekumisa iyo grafiti munda Corel akatanga Corel VideoStudio kutonga vhidhiyo kugadzirisa zvakare!
Panyaya yehunhu hwevhidhiyo uye Kugadziriswa, iyi yekupedzisira Kucheka Pro imwe nzira inovimbwa zvakanyanya. Mukuenzanisa neFinal Cut Pro, iyi software ine zvese zvekukwikwidza nayo uye nekuwedzera kumira semuvhidhiyo mupepeti. Iwe unogona kushandisa premium mhedzisiro uye yepamusoro-resolution vhidhiyo yekugadzirisa kubva ku720p kusvika 2610p ine yakasarudzika yekugadzirisa maturusi.
Iyo ine zvinopfuura zvinopfuura zviuru zviviri zvemafirita, zvakakwana kumushandisi kune ako anotevera 10,000+ mavhidhiyo. Iyo zvakare ine yakasarudzika mafirita, mavara grading, uye shanduko. Rinewo chinovhara wezvaiitika zvaunogona kushandisa pamwe chete zvakarerekodhwa Webcam chinhu. Iyo zvakare ine NewBlueFX, Boris FX, uye ProDAD. Shandisa Corel VhidhiyoStudio Ekupedzisira kugadzira uye nehunyanzvi akagadziridzwa mavhidhiyo.
2000+ Mafirita & Zvakawanda zvekugadzirisa maturusi
Yakakwira-resolution vhidhiyo yekugadzirisa
Inovimbwa uye inoshandiswa neVashandi
Hapana yemahara vhezheni inowanikwa
Yakazara vhezheni imwe nguva na₹5,890
Simudzira kubva kune vhezheni vhezheni pa₹4.714
Yemahara-muyedzo vhezheni inowanikwa yemakumi matatu-mazuva
3. Avid Media Munyori
Iyi software inozivikanwa uye inoshandiswa zvakanyanya muindasitiri yemufirimu. Yakaburitswa muna 1989 yeMacintosh, iine zvimwe zviitiko shanduro dzayo nyowani dzakaburitswawo windows. Mukuenzanisa neFinal Cut Pro, iyi software inopa hunhu hwakaenzana uye maficha seWindows. Iyo software ine ine intuitive dhizaini uye iri nyore mushandisi-interface. Iyo software ine 4 shanduro uye inogona kushandiswa seyakazvimirira software.
Iyi yekupedzisira Kucheka Pro imwe nzira inguva-inoshanda neayo akasarudzika maficha uye akavakirwa-akagadzirwa interface, akagadziridzwa nekufamba kwenguva. Iyo software inogona kushandiswa yemunhu pamwe neyekushandisa kwehunyanzvi. Iyo izere nematurusi akatiwandei, nani kururamisa ruvara, uye VFX. Iwe unogona zvakare kugadzirisa ruzha kuti uenzane neiyo mhando yevhidhiyo uye usarega ruzha ruchikanganisa kugona kwako.
Shanduro ina dziripo ndeyeMedia Composer Kutanga, Media Composer, Media Composer Ultimate, uye Media Composer Enterprise. Shanduro yega yega ine akasiyana maficha, uye zvirinani pane yekutanga. Yekutanga vhezheni Media composer Chekutanga chakanakira maartist matsva mukugadzirisa vhidhiyo sezvo iri yemahara uye Inopa zvakakosha zvekugadzirisa vhidhiyo. Inotevera pane inobhadharwa uye inowanikwa yemahara kuyedzwa kwemazuva makumi matatu.
Shanduro yemahara inowanikwa
Iyo yakabhadharwa vhezheni ine yemahara muedzo unowanikwa
Dhizaini dhizaini uye nyore kugovana, kupinza, uye kutumira kunze
Mutengo wepamusoro wezvinyorwa zvakabhadharwa
Midhiya munyori pa499.99 $ / gore
Yekupedzisira pa 49.99 $ / Mwedzi
Enterprise pamutengo unoshanduka
Iyi ndiyo yakanakisa yekupedzisira Kucheka Pro imwe nzira yemahwindo uye inowanikwa muchitoro cheMicrosoft. Iwe unogona kugadzira mavhidhiyo uchishandisa mifananidzo, clip, uye mumhanzi mune ino software. Iyi vhidhiyo yekugadzirisa software inozivikanwa kwazvo pakati pevashandisi vewindows nekuda kwayo windows nyore mushandisi-interface.
Mabasa senge kujoina vhidhiyo, mimhanzi yekumashure, uye chinyorwa chemavara chinogona kuitwa kusimbisa mavhidhiyo ako mune ino software. Zvimiro senge firita yemufananidzo, transaction, uye zoom mhedzisiro inogona kuwedzerwa futi. Kugadzira kuri kukurumidza uye inochengetedza yakatsiga uye yepamusoro-resolution vhidhiyo yekugadzirisa. Iwe unogona kuwedzera mimhanzi kubva kune yakavakirwa-mukati matraki kana kuendesa yako yega faira.
Inotarisirwa kushandiswa pazvinangwa zvemunhu, ine shanduro mbiri. Iyo Moviemaker 10 ndeye yemahara vhezheni uye inoita Ipa ese anodikanwa evhidhiyo yekugadzirisa maficha. Nepo Moviemaker Pro iri yechokwadi Final Cut Pro imwe nzira muProfessional kushandiswa. Iyo Pro vhezheni inobhadharwa uye inobvumidza kuwana kune mamwe maficha uye iri nani mhando vhidhiyo yekugadzirisa. Yekudzidza vhidhiyo yekugadzirisa vhidhiyo, iyi Anwendung inogona kuve yakanaka yekutanga poindi.
Yemahara vhezheni ye windows
Basic maficha mune yemahara vhezheni
Yakagadzikana, inokurumidza, uye inoshanda
Yakatemerwa ficha mune yemahara vhezheni
Hazvikurudzirwi kushandiswa kwehunyanzvi
8.99 $ kamwe-nguva kutenga mutengo
Iyi yekupedzisira Kucheka Pro imwe nzira Inopa zvinopfuura zveFinal Cut Pro. Iyo software inobvumidza kupa, modelling, kuveza, kuchangamuka, uye kubirira pamwe nekugadzirisa vhidhiyo. Yayo yevhidhiyo yekugadzirisa ficha inobvumira yakakosha yekugadzirisa senge vhidhiyo yekucheka uye splicing. Iyo software zvakare inobvumidza odhiyo kusanganisa kuti ubatsire yemhando yepamusoro vhidhiyo yekugadzirisa.
Mune odhiyo kugona, inobvumidza kukwesha, synching, uye waveform visualization. Kunze kwekutanga vhidhiyo yekugadzirisa, inotsigira yakaoma vhidhiyo yekugadzirisa maficha senge Vhidhiyo masking uye color grading. Iyo software inoshandiswa nevanogadzira mutambo, weanoratidzira muimbi, s uye graphic dhizaini. Iwe unogona kudzora kumhanya, wedzera shanduko, mafirita, uye keyframes.
Iyo vhidhiyo mupepeti inouya izere nematuru uye maficha senge Live preview, luma waveform, chroma vectorscope, uye histogram kuratidza. Iwe unogona panguva imwe chete kushanda pane makumi matatu nemaviri mavhidhiyo sezvo ichiuya nemakumi matatu nematatu. Kwete vhidhiyo chete asiwo mifananidzo, odhiyo, masiki, uye mhedzisiro. Iyi yekupedzisira Kucheka Pro imwe nzira ndeyeTrouville sezvo iri yemahara kushandisa uye Inopa zvinopfuura zvinowanzo shandiswa emahara evhidhiyo edhita.
Yemahara yemutengo, kushandiswa kweupenyu hwese
Kwete kunyanya kugadzirisa vhidhiyo
Iyi Final Cut Pro imwe nzira inowanikwa windows. Iyi vhidhiyo mupepeti, nenzira dzose, mukwikwidzi ane simba weFinal cut ye uye kunyangwe pakati peFinal Cut Pro dzimwe nzira. Mupepeti anotendera ekutanga vhidhiyo kugadzirisa uye nekukurumidza kurumbidzwa nekukurumidza. Inosanganisira zvinopfuura makumi mashanu mhedzisiro uye shanduko kuverengera kugadziridza kwekugadzira.
Kupa makwikwi akasimba kune premium software inobvumidza Kugadziridza uye kutumira kunze kwe3D mafaera uye 360 ​​mavhidhiyo mafaira. Inotsigira nhamba yakakura yeFaira mafomati uye iine-akavaka maturusi maturusi ekuendesa mavhidhiyo ane mhando yepamusoro odhiyo. Yayo yekushandisa interface iri nyore uye inobvumira kugadzirisa uye kuendesa mavhidhiyo nekudhonza uye kudonhedza.
Iyo vhidhiyo yekugadzirisa software inobvumira kugovana uye kutsva kune maDVD maficha kurerutsa kugovana. Iwe unokwanisa-kuchenesa ruvara, kudzora kumhanya, uye kuita vhidhiyo kugadzikana. Iwe unogona zvakare kugadzira akavharika mavhidhiyo uye kutumira kunze mavhidhiyo mune yakakwira resolution kubva pa4k kusvika ku720p uye nezvimwe. Iyo yemahara vhezheni inowanikwa kune isiri-Nyanzvi yekushandisa, yevatengi-shandisa. Zvekushandisa kwehunyanzvi, unogona kutenga iyo yakabhadharwa vhezheni.
Nyore uye yakapusa vhidhiyo yekugadzirisa
Nhamba yakakura yekuchinja
Shanduro yemahara yekushandisa wega
39.95 $, mubhadharo wenguva imwe
Iyi yekupedzisira Kucheka Pro imwe yakasarudzika kubva kune mamwe sezvo iyi isiri software asi yepamhepo vhidhiyo yekugadzirisa chishandiso. Seimwe nzira kune yekutanga vhidhiyo yekugadzirisa chishandiso, izvi zvinogona kusaririra kumashure zvishoma kune Nyanzvi. Asi yekushandisa zuva nezuva, inoshanda zvakanyanya.
Yekutanga vhidhiyo yekugadzirisa senge kubatanidza, kumanikidza, kushandura saizi, slideshow, nezvimwe zvinogona kuitwa online pane ino saiti. Paunoshanyira saiti iwe unowana mamwe maturusi ekutanga anoratidzwa papeji rekutanga. Paunenge uchiongorora, iwe unogona kuwana zvimwe zvekuwedzera maficha ayo Anogona kupa Akadzikama YouTube akagadzirira mavhidhiyo.
Kunyangwe pasina macustomer maapplication kana software inopihwa neino saiti. Unogona kuisa app yayo mumahwindo 10. Kuisa, vhura vhidhiyo muMicrosoft Edge. Wakaenda kutwasuka ellipsis uye kuenda-kune maapp. Mune maapplication tinya pane 'isa ino saiti seapp' uye tinya pinda mubhokisi rebhokisi iro maapplication. Inotorwa pasi uye inogona kumhanya kubva pakutanga. Kuita izvi kwaizoita kuti uwane maficha uye zvishandiso zvive nyore.
Inogona kushandiswa parunhare zvakare
Yekutanga vhidhiyo yekugadzirisa inowanikwa
Hapana software yakatsaurirwa yeWindows
8. DaVinci Kugadzirisa
Imwe yakakurumbira vhidhiyo yekugadzirisa software inoshandiswa kune Professional vhidhiyo yekugadzirisa. Kunyangwe iri yeUnyanzvi kushandisa ine yakapusa uye inokurumidza kushandiswa dhizaini. Ngazvive zvive vashandisi vatsva kana vekare nyanzvi iyi Anopa maficha uye mhando kune ese ari maviri. Iyo software Inoratidza maturusi mazhinji anoda kugadziriswa munzvimbo imwe, izvo zvisiri izvo nemamwe akawanda anozivikanwa software.
Iko kusanganisa kwekururamisa kwemavara, zvinoonekwa zvinoonekwa, uye maficha ekufamba mune imwe software kunodzivirira kudzikira kwehunhu hwevhidhiyo. Zvishandiso mune ino software zvinoshandiswa kugadzirisa mumamuvhi. Aya maturusi anoshandiswa neProfessional colorists, editors, uye VFX muimbi.
Mune yayo yazvino vhezheni, iwe unowana Wide Gamut HDR, mbeva, uye keyboard-yakavakirwa kugadzirisa. Injini-yepamusoro odhiyo injini inowedzerwa inokwanisa kutsigira 2000 audios pane system. Iyo ine huwandu hukuru hwekushandurwa, vhidhiyo mhedzisiro, uye zita, s, nezvimwe. Iyi Yekupedzisira Kucheka Pro imwe nzira ine inoyevedza dhizaini uye inowanikwa senge yemahara uye yakabhadharwa vhezheni yezvose zviri zviviri.
Shanduro yemahara ine zvakakosha maficha zviripo
Zvimwe zvishandiso uye maficha
Zvakaipa mushandisi ruzivo
DaVinci Resolve Studio 17 pa, 25,900
Iyi yekupedzisira Kucheka Pro imwe sarudzo yakanaka sezvo ichivhara zvese zvinokuvadza neFinal Cut Pro. Chekutanga, iyi vhidhiyo yekugadzirisa software yakagadzirwa muna 2004 yeWindows inoita kuti ienderane nemidziyo yekushaiwa. Chechipiri, iyi software ndeye yakavhurika-sosi vhidhiyo yekugadzirisa software zvinoreva kuti yakasununguka kurodha pasi uye kushandisa.
Iyi software ndeye muchinjikwa-chikuva vhidhiyo yekugadzirisa chishandiso. Iyo inotsigira dzakasiyana siyana midhiya fomati rutsigiro, odhiyo, vhidhiyo, uye macodec. Iyo software haidi kunze kwenyika saka ichibvumidza yemuno kugadzirisa neakawanda-fomati nguva, resolution, uye furemu-chiyero.
Iyo inobvumira skrini, webcam, uye odhiyo kutora uye inotsigira yakakwira 4k resolution. Iyo ine yakapusa, yakarongeka, uye mushandisi-inoshamwaridzika interface. Iyo inogamuchira inogadziridzwa nguva dzose. Iyo ine shanduko, vhidhiyo mhedzisiro, uye yakakosha odhiyo odhiyo. Kuve yakavhurika-sosi software ndeye yemahara zvachose saka yakanaka kune vanotanga kuyedza. Kunyangwe Nyanzvi dzinoishandisa dzinoshandisa hunyanzvi hwavo hwepamberi kuti vawane zvakanakisa mune ino software uye havaodzwe moyo.
Vhura sosi uye yemahara kushandisa
Inotsigira mafomati akawanda
Yakagadzirirwa windows ichi chimwe chisarudzo chakasarudzika seFinal Cut Pro imwe nzira. Yakatanga kugadzirwa muna 2005 uye inoshandiswa zvakanyanya kubvira ipapo. Iyo software inonunura yemhando yekugadzirisa pane ako mavhidhiyo. Iyo software inotsigira mazhinji mafomati evhidhiyo uye kugadzirisa, kuunza kunze, kutumira mukati mawo. Iyo zvakare inobvumidza 3D yekugadzirisa.Kuti uzviise zvichipesana nedzimwe nzira dzeFinal Cut Pro uye software yacho pachayo, ine huwandu hwakawanda hwezvishandiso.
Iyo ine NEWBlue Vhidhiyo mafirita, ProDAD vhidhiyo mhedzisiro, uye VST odhiyo plug-ins yekusimudzira odhiyo. Nekugadzirisa pamwe chete mavhidhiyo e4k, kururamisa ruvara uye mafirita aya anowana zvakanakisa pasoftware. Iyo software ine yakakwidziridzwa Mync chirongwa icho chinotenderera kuronga, kugovana clip, uye midhiya mafaera.
Sekupedzisira Kucheka Pro imwe nzira, inotsigira Yakakwira Dynamic Range mune mushandisi-inoshamwaridzika kugadzira vhidhiyo yakapusa uye inoshanda. EDIUS inoda inguva-imwechete yekudyara nekushandisa kwehupenyu. Kamwe kakatengwa unogashira emahara uye akajairwa meseji uye unowana zvachose rezinesi kana iwe uchitenga uye unogona kuishandisa kweupenyu hwese. Iwe unogona kuwana 30-mazuva emahara ekuyedza vhezheni kuti uwane ruzivo rwe software uye uzvisarudzire wega.
Imwe nguva kudyara.
Rezinesi rekushandisa kweupenyu hwese
30-Mazuva emuedzo vhezheni inowanikwa
Iyi ndeimwe yakakurumbira vhidhiyo yekugadzirisa software. Iyi yakasimba vhidhiyo yekugadzirisa software inokushongedzera neakawanda maturusi ekugadzira anoshamisa mavhidhiyo. Iyo ine intuitive dhizaini inobvumira vashandisi kuti vafambe kuburikidza nesoftware zviri nyore. Icho chinhu chikuru chevatangi vekutanga mukugadzirisa vhidhiyo neayo mushandisi-inoshamwaridzika interface.
Iwe unogona kugadzirisa epamusoro-resolution mavhidhiyo kusvika ku4k resolution Iyo inotsigira akawanda mavhidhiyo mafomati senge MP4, AVI, FLV, MKV, nezvimwewo pamwe nemodhiyo mafomati senge MP3, WAV, M4A, nezvimwe. Mumifananidzo zvakare inotsigira yakawanda mafomati. Iyo ine yakakosha maficha senge yekumhanyisa kutonga, Vhidhiyo yekucheka, kupatsanura, kutenderera, kusanganisa uye kurima, reverse, pikicha mumufananidzo, uye kufamba kwekufamba
Iyi Yekupedzisira Kucheka Pro imwe nzira inobvumira nyore kugovana kwemavhidhiyo akagadziridzwa. Iyo app inobvumidza kurodha kune vezvenhau, kupisa kuDVD, uye kuenderana neIOS uye Android. Iyi Software inowanikwa mahara pamahwindo. Iwe unogona kusarudza iyo yakabhadharwa vhezheni kuti uwane mamwe maficha senge emahara ekuvandudza, hapana watermark ine mamwe maficha.
Shanduro yemahara inowanikwa.
Basic uye akakosha maficha anowanikwa neyemahara vhezheni.
Huwandu hukuru hwemafaira emafaira anotsigirwa.
Hazvitenderi kuwanda kuwanda kamwechete.
Yakabhadharwa vhezheni pa $ 7.99 / mwedzi
Iyi yekupedzisira Kucheka Pro imwe nzira yakazara nezvinhu zvakawanda zvinowanzo shandiswa neVhidhiyo maartist munzvimbo imwechete. Iyo software inoenderana neyekuseta uye maturusi e3D pamwe nekugadzirisa vhidhiyo. Iyo software ine yakafara-yakatarisa ekuona mhedzisiro toolkit. Iyi software inoshandisa imwe yeinogamuchirwa tekinoroji mupasi senge BorisFX's Pro tilting maturusi.
Iyo Software ine muunganidzwa wekutanga vhidhiyo ekugadzirisa maturusi senge kopi, trim, uye slice, nezvimwe Pamwe chete nezvakakosha zvishandiso ine yayo yakasarudzika muunganidzwa wematurusi, akanakisa odhiyo maturusi, uye ehupenyu maturusi. Iyo ficha inoita kuti ive yakanakisa yekupedzisira Kucheka Pro imwe nzira ndeyekuti inotsigira 8k resolution mavhidhiyo. Zvakare kumhanya kwayo kwekukurumidza kumhanyisa uye 32-bit inoyerera-poindi ruvara.
Inoendesa nekukurumidza Kugadzira uchishandisa yayo GPU yakawedzera system. Ipa iyo inodikanwa Hardware senge Intel GPU iyo software painoshandiswa ichave inokurumidza uye inotsvedzerera. Inotsigira anopfuura avhareji mafomati enhau uye yakanakira VFX uye 3D modelling ine simba rekunyora mameseji. Iyo zvakare ine vhidhiyo inogadzikana uye chrome kiyi yekuigadzira iri nani kupfuura zvayakatove.
Zvakanakisa zvemhando yepamusoro uye maturusi
Zvakare yakakura VFX software
Zvakanakisa kushandiswa kwehunyanzvi
Inesimba Hardware inodiwa
Demo Yemahara ine mashoma maficha
Zadzisa software imwe-nguva tenga pa $ 209.40
13. Autodesk Utsi
Iyi Imwe software software yekupedzisira Cheka Pro Inopa nguva-yakatarwa yekugadzirisa uchishandisa maturusi. Iyo nguva yenguva-yakatarwa yekugadzirisa inobvumira kupedzisa vhidhiyo kune yakanakisa ruzivo panguva dzese hwindo. Iyo inobvumira node-based compositing kuti itore iwe kuti ugadzirise zviri nyore pasina kubuda kune iyo timeline maonero.
Iwe unogona kuunza uye kugadzira 3D geometry uye zvinyorwa, wedzera 3D mazita kune yako vhidhiyo uchishandisa iyi software. Kucheka kwesimba kunokupa kudzora kwenguva uye kumhanya. Iyo software ine avhareji midhiya faira fomati rutsigiro. Iyi yekupedzisira Kucheka Pro imwe nzira ine demerit iyo inowanikwa kune Mac neLinux chete.
Iyo software ine avhareji Hardware zvinodiwa uye inoshanda mushe ne4GB RAM uye Intel musimboti odhiyo. Iyi software inouya nenhamba yakawanda yemavhidhiyo mhedzisiro yekushandisa uye vhidhiyo yekuvandudza maturusi. Yayo yemahara muyedzo vhezheni inowanikwa pamwe neye yakabhadharwa vhezheni. Izvo zvakanakisa kushandiswa kwehunyanzvi uye kwete kwevanotanga sezvo maturusi ekugadzirisa akaomarara.
Haisipo for windows
Chete zveMac neLinux
Yemahara Muedzo vhezheni
Yakazara vhoriyamu kurodha pasi pa $ 1,620
Iyi yakavhurika-sosi vhidhiyo yekugadzirisa software mune ino runyorwa. Iyo ine maficha ekushandisa seyekupedzisira Kucheka Pro imwe nzira. Inowanikwa kuMac, Linux, uye windows. Iyo muchinjika-chikuva vhidhiyo mupepeti. Iyo software iri nyore kushandisa uye vanhu vanoidzidza nekukasira sezvo iine nyore mushandisi-interface.
Iwe unogona kuita zvese zvakakosha zvevhidhiyo mune ino software sekucheka, kucheka, uye kutema. Pamwe pamwe nezvinokosha, unogona kurarama zvinhu zvinounza hupenyu kumavhidhiyo. Iyo software inobvumidza kuwanda kwakawanda kweiyo watermark, vhidhiyo, odhiyo makaseti, nezvimwe. Iwe unogona KUGADZIRA gadziridzo yemavara uye wedzera mavhidhiyo mhedzisiro uchishandisa iyi software.
Iwe unogona kuona audios semafomu ekushambadzira uye kunyangwe uvawedzere kumavhidhiyo ako. Pamwe pamwe nemhedzisiro iwe unogona kuwedzera mazita, kupa 3D animated mazita uye mhedzisiro. Iyo ine nyore kushandisa interface uye inobvumira kuwedzera mavhidhiyo kugadziriswa nekudhonza uye kudonhedza. Unogona kudzora nguva, kuita vhidhiyo kumhanya nekukurumidza kana kunonoka, kupindirana kuburikidza neanoshanda interface.
Vhura sosi uye yemahara
Zvese zvakakosha maficha zviripo
Zvimiro seizvo zvevamiririri vhidhiyo edhitaina.
Hapana chekuwedzera chimiro
Yekupedzisira mune rondedzero yeFinal Cut Pro dzimwe nzira, iyi software iri zvakare inoshandiswa zvakanyanya kune Professional Proposes. Yakave ichishandiswa kumafirimu mazhinji senge Wolf yemadziro emugwagwa, Pulp Fiction, kutaura kwaMambo, nezvimwewo software ye2020 inouya mupakeji inosanganisira zvese izvo munhu angangoda kugadzira, kugadzirisa mavhidhiyo chero chinangwa.
Iyo ine yakapusa dhizaini yakagadziridzwa pamusoro pemakore emushandisi mhinduro uye optimization. Iyo inobvumira isingashande nguva yekugadzirisa uye yekucheka uye kugadzirisa for 4k resolution mavhidhiyo. Unogona kutumira kunze kune youtube kana Vimeo pasina comPromising mhando musarudzo 4k.
Iyo inotsigira yakakura nhamba yemidhiya mafomati uye inobvumira 32bit GPU kunyatsoita. Pakutora pasi unowana rezinesi remazuva manomwe rekushandisa seyero rekuyedza. Kana iwe uchizviwana chaicho Final Cut Pro imwe nzira, unogona zvakare kutenga zvitsva zvakasiyana nekusiyana kwenguva kwechokwadi. Kuti usimudzire kuPro, iwe unofanirwa kungonyoresa uye iwe unowana mukana kune maficha anoshandiswa kugadzira, kugadzirisa mafirimu.
Yakakurumbira uye nyore kushandisa
Yemahara yemazuva manomwe-kuyedzwa kunowanikwa
Hapana Yemahara Shanduro inowanikwa
Hazvikurudzirwe kune vanotanga
$ 24.99 / mwedzi
Final Cut Pro hapana mubvunzo kuti ndiyo yakanakisa yekugadzirisa vhidhiyo software, ndosaka vashandisi vewindo vachida imwe nzira yeiyi software. Asi ine mugove wayo wekutadza uye hapana chakanyanya kunaka chinombouya chemahara, kana iri Final Cut Pro, inodhura!Saka idzi nzira dzeFinal Cut Pro ndidzo dzinouya dzinotengeka, mune dzimwe nguva dzakasununguka pamwe neakanaka maficha uye maturusi. Hazvina basa kutenga Mac yekuita Nyanzvi kana yemhando yepamusoro vhidhiyo yekugadzirisa. Zvese zvaunoda ndeimwe yeiyi software iwe yaunogona kuwana uye zvehunyanzvi hunyanzvi.
Kupiwa kwavo mushandisi-inoshamwaridzika dhizaini zvinogona kutokwanisika kuti iwe haungade chero chinodiwa hunyanzvi. Iyi software inopa nzira kune yako kugona pasina kunetseka nezve mhando kana mari. Tanga uye pamwe ungatoedza ivo vese! (kanenge vakasununguka)
Q. Pane chero windows vhezheni yeFinal Cut Pro?
Makore.Parizvino, Kwete. Asi kupihwa kudiwa uye kufarirwa kwesoftware munhu anogona kusunungurwa mune ramangwana. Kunze kwaizvozvo, kune zvakawanda zvingasarudzwa semapeni akanyorwa pazasi ayo anounza anenge akafanana mhedzisiro yemhando. Unogona kuedza mamwe anozivikanwa windows ekugadzirisa software senge Adobe kana Corel kuti uwane Final Cut Pro-kunge chiitiko.
Q. Pane here yemahara vhezheni yeFinal Cut Pro?
Makore.Iko hakuna yemahara vhezheni yeFinal Cut Pro asi iwe unogona kuishandisa mahara kwemazuva makumi mapfumbamwe senge yekuyedza vhezheni. Unogona kuwana ruzivo rwakazara uye zano rakaringana nezve software usati wafunga kuitenga. Kuedzwa kwemazuva makumi mapfumbamwe nemakumi mana kunopfuura zvakakwana kuti iwe usarudze kana zvakakodzera kana kuti une zvese zvaunogona kubva murusununguko rwemahara.
Q. Ndingaite sei kuti ndiwane Yekupedzisira Kucheka Pro yemahara yemahara?
Makore.Mhinduro yakapusa uye yakakwana kumubvunzo uyu ndeyekuti, haugone. Asi iwe haufanire kuora moyo sezvo iwe waisakwanisa kana kuiwana mahara muMac. Asi iwe unogona kuwana yemahara vhidhiyo yekugadzirisa software iyo inogona kuendesa yakanakisa mhedzisiro yako yekugadzira inogona kugadzira uye desktop yako inogona kusangana neayo Hardware. Imwe yeakanakisa software yemahara, Yekupedzisira Kucheka Pro imwe nzira ye windows ndeye Openshot.
Yakanakisa Garageband Dzimwe nzira
Rabb.it Alternatives (2020) - Wepamusoro 6 Saiti Saiti
Mahara Netflix Maakaundi 2020 | Nzira Dzakanakisa dzekuwana
unogona kushandisa kik pane mac
tarisa hq mafirimu mahara
miller akakwira hupenyu makodhi jenareta
nditarise ini roblox id
tarisa emahara mafirimu matsva izvozvi
zvinorevei ts pa123movies
webhusaiti iwe yaunogona kuona mafirimu emahara